खुसी रहन सिकाउने चलचित्र ‘ह्याप्पिनेस्’, हेर्न छुटाउनु भयो कि ! - Ratopati
खुसी रहन सिकाउने चलचित्र ‘ह्याप्पिनेस्’, हेर्न छुटाउनु भयो कि !
काठमाडौं – पछिल्लो समय छोटा चलचित्र निर्माणको लहरै चलेको छ । यसरी निर्माण गरिने चलचित्रमा कतिले अस्लिल विषयबस्तु उठाउने गरेका छन, भने कतिले बिभिन्न सामाजिक र चेतना मुलक बिषय प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
यस्तैमा खुसीका बिषयमा छोटो चलचित्र ‘ह्याप्पिनेस’ निर्माण भएको छ । विस्वास भण्डारीको निर्देशन रहेको यो चलचित्रमा संघर्षमय जीवन बिताइरहेका एक पात्रले खुसी रहन र खुसी दिन गर्ने क्रियाकलाप बिषयबस्तुका रुपमा उठाइएको छ ।
राजेश बोगटी ,गोपाललाल तामाङ र जस्मी श्रेष्ठको अभिनय रहेको चलचित्र सिम्पल कथामा बनेपनि प्रस्तुति निकै आकर्षक रहेको छ । अनुपम अछामी र बिजयको छायाँकन रहेको चलचित्र राजेश बोगटीले लेखेका हुन् । चलचित्र एसिटी प्रो नेपालले आफ्नो युट्यु मार्फत बाहिर ल्याएको छ ।
हेर्नुस् ह्याप्पिनेसको भिडियो